Previous Article Justin Trudeau na Ndi otu Libral Pati Enwena Mmeri na Kanada
Next Article Ọnwụ egbuola Maazị Elaịja Commings
Mba Yukren na mba Rọshịa na-alụ agha kamgbe afọ abụọ. N'iji nyere ndị Yukren aka, ndị ọgbakọ omebe iwu mba Amerịka, US Kọngres, mawapụta akatamkpo ego ahụ maka ịkwado ndị Yukren n'ịzụ ngwa agha.
Onye isi ala Amerịka, Donald Trump, mechara kpachie yabụ ego. O kweghị enye ya ndị Yukren n'oge tosiri etosi. N'ọnwa abụọ gara aga, mgbe Trump na onye isi ala ndị Yukren na-akpa ụbụbọ n'ekwe ntị, Trump gwara Volodymyr Zelensky n'o nwere aka o kwesịrị ịnyere yabụ Trump tupu o nwete ego ahụ. Trump rịọrọ Zelensky ka ọ malite nnyocha megide Joe Biden, onye so azọ ọkwa onye isi ala Amerịka n'aha otu Demokrat.
Trump rịọrọ Zelensky ka ọ malite nnyocha megide nnwa Joe Biden bụ onye ruburu ọrụ na Yukren.
Mgbe ndị Demokrat chọpụtara nke a, ha malitere ime nnyocha nke ha nwere ike iji chụtuo Trump n'ọkwa ọchịchị. Trump mechara gọwa agụgọ na enweghị kwịdprokwo dị na yabụ okwu. Ụfọdụ ndị Rịpọblikan na-agọrọ Trump ọnụ ya.
Mana taa bụ Tozdee, oke ikuku feziri mee ka ndị mmadụ hụ ike ọkụkọ.
Mulvaney, onye na-arụrụ Trump ọrụ, kwuputere taa na n'ezie, Trump riọrọ Zelensky arịrọ ahụ. Ndị omebe iwu ka na-eme nnyocha na US Kọngres.